iQOO Neo6 SE inoratidzira yakatsanangurwa pamberi pekutanga Chivabvu 6
April 30, 2022 by jerry23
iQOO ichavhura iyo Neo6 SE muna Chivabvu 6 kuChina, uye kambani yakatosimbisa makiyi ayo kuburikidza nesocial media teasers, ichangoburwa inotsanangura kuratidzwa kweiyo smartphone. Iyo iQOO Neo6 SE icharongedza Samsung-yakagadzirwa E4 OLED skrini ine 120Hz yekumutsiridza chiyero, 1,200Hz yekubata sampling rate, uye 1,300 nits peak kupenya. Iyo inoratidzira ndeye HDR10+ yakasimbiswa uye zvakare ine ... [Verenga zvakawanda ...] nezve iQOO Neo6 SE inoratidzira yakatsanangurwa pamberi paMay 6 kutanga
Honor Play 30's specs yakaburitswa sezvo inowana MIIT certification
Honor yakafumura Play 30 Plus muna Zvita wapfuura muChina, uye inogona kuzivisa iyo vanilla vhezheni munguva pfupi, iyo yakasimbiswa neChina Bazi reIndasitiri uye Ruzivo rweTekinoroji (MIIT). Iyo Honor Play 30 (VNE-ANOO) yakanyorwa pawebhusaiti yeChinese certifying authority ine akawanda ayo, kusanganisira 2.2GHz octa-core processor, 6.51 ″ HD+ TFT skrini, uye ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Honor Play 30's specs yakaburitswa sezvo inowana MIIT certified
Iyo Sony Xperia 1 IV inogona kunge iri mumutsara wekiyi yekusimudzira kamera
April 30, 2022 by bartez64
Tine ruzivo rwakawanda se-asi-rusina kuvimbiswa kuti tigovane nezve iri kuuya Sony Xperia 1 IV yemureza smartphone, neruremekedzo rwerunyerekupe: iyo handset sezviri pachena ichauya neiyo selfie kamera kukwidziridzwa, asi haizove neadapter yekuchaja inosanganisirwa mukati. bhokisi. Iko kusimudzira kwekupedzisira (kuburikidza neNotebookcheck) hakuzoshamisike, sezvo vazhinji vanogadzira mafoni vari kuita… [Verenga zvakawanda ...] nezve Iyo Sony Xperia 1 IV inogona kunge iri mumutsara wekiyi kamera kusimudzira
Maitiro ekuwedzera thumbnail paYouTube
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha kutarisisa kana uchigadzirisa zvemhando yepamusoro paYouTube ndizvo zvinotanga kuonekwa nevanhu: pikicha. Zvirimo uye kugadzirisa kwevhidhiyo yako kwakakosha, asi iwe unofanirwa kufungidzira yakasarudzika yekuvhara mufananidzo kuti iwane kukwezva. Ngatiendei pamusoro pekuti towedzera kana kushandura sei pikicha pavhidhiyo yako yeYouTube. Verenga zvakawanda: Ungachinja sei yako… [Verenga zvakawanda ...] nezve Maitiro ekuwedzera thumbnail paYouTube
Saizi yebhatiri yeSamsung Galaxy Z Flip4 inodonha
MunaNovember wapfuura, takanzwa Samsung Galaxy Z Flip4 ichisvika gore rino ichave nebhatiri rakaenzana neGirazi Z Flip3. Asi, mushumo mutsva wakabudiswa neDutch GalaxyClub inoti iyo Galaxy Z Flip4 ichatakura bhatiri rakati kurei. Chinyorwa chinoti iyo Galaxy Z Flip4 (SM-F721) ichauya nemabhatiri maviri, iine mamodhi makodhi EB-BF721ABY uye EB-BF722ABY. … [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy Z Flip4's saizi yebhatiri inodonha
Xiaomi 12 Pro Ongororo: Iyo Yekupedzisira Mureza we2022?
Ngave Ferrari inohwina mijaho mushure memakore angangoita matatu kana kuona Leicester City ichisimuka kubva mudota ichihwina EPL muna 2016. Chinogara chiri chishamiso kuona underdog ichihwina. Nepo Xiaomi, neimwe nzira yekufungidzira, isiri underdog kana zvasvika pakutengesa mafoni, dzimwe nguva inonetsekana mumusika wepamusoro smartphone uko kutarisisa hakusi zvakanyanya pa… [Verenga zvakawanda ...] nezve Xiaomi 12 Pro Ongororo: Iyo Yekupedzisira Mureza we2022?
nubia Red Magic 7 Pro inoenderera mberi kutengeswa mumisika yepasirese
Iyo nubia Red Magic 7 Pro yakatangwa muChina muna Kukadzi yave kuwanikwa kutengwa mumisika yepasi rose. Iyo modhi yepasirese ine 16GB RAM pabhodhi uye maviri mavara sarudzo - Obsidian uye Supernova. Iyo yekutanga inouya ne256GB yekuchengetedza uye yekupedzisira ine 512GB yekuchengetedza, mutengo pamadhora mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe / € 799 uye $679/£799/899, zvichiteerana. Iyo Red Magic 759 Pro inofambiswa ne… [Verenga zvakawanda ...] nezve nubia Red Magic 7 Pro inoenderera mberi kutengeswa mumisika yepasirese
iQOO Neo6 SE kamera yakaratidzwa
Rangarira kana zviziviso zvefoni zvitsva zvaiitika zvese munzira imwe, pane chimwe chiitiko, ne zero specs ichiburitswa zviri pamutemo kare nemakambani pachawo? Ndiwo aiva mazuva. Ipapo OnePlus yakauya ikachinja mutambo nekudyisa kwayo kwediki nzira yekugadzira uye kuchengetedza hype kwenguva yakareba. Zvakanaka, zvino munhu wese ari kuita izvo chete, ... [Verenga zvakawanda ...] nezve iQOO Neo6 SE kamera yakaratidzwa
Saizi yebhatiri yeGoogle Pixel Watch inodonha
Mushandirapamwe wePixel Watch leaks wave kushanda zvizere pamberi pechiziviso chayo chingangoitika kuGoogle I/O mwedzi unouya. Takatoona prototype "netsaona" "yakakanganwa" muresitorendi, mubhokisi asi isina charger. Izvi zvakakwanisa kunyatso kwanisa kuratidza nyika iyo inouya hardware pasina zvakare kuratidza chero chikamu chesoftware yayo. Ipapo wachi yakasimbiswa ne… [Verenga zvakawanda ...] nezve saizi yebhatiri yeGoogle Pixel Watch inodonha
DxOMark: OnePlus 10 Pro makamera anokora zvisina kunaka, nzvimbo kuseri kweMi 10 Pro
DxOMark yakaburitsa ongororo yayo yeOnePlus 10 Pro's kamera uye inoita kunge inoenderana nezvakawanda zveongororo kunze uko. Mhedziso ndeyokuti ruoko rune zvimwe zvinhu zvakakura zvinoitadzisa kuenderana nemuridzi wayo. Nekuda kweizvozvo, ruoko runotora nzvimbo yechimakumi maviri nenomwe munzvimbo yepasi rose yeDxOMark, kuseri kwezvinofarirwa neXiaomi Mi 27 Pro, Mi 10 Pro, vivo X11 Pro+ uye Apple ... [Verenga zvakawanda ...] nezve DxOMark: OnePlus 10 Pro makamera anokora zvisina kunaka, nzvimbo dziri kuseri kweMi 10 Pro
vivo S15 Pro inoonekwa muTENAA uye 3C zvinyorwa padivi pefoni itsva isinganzwisisike
Mafoni maviri ari kuuya eVivo akaonekwa pane akati wandei mazita muChina. Iko kune vivo V2203A iyo inofungidzirwa kuti ndiyo S15 Pro uye isinganzwisisike vivo V2207A iyo yese yakabuda paTENAA padivi pemamwe mafungidziro ekutanga. Iyo S15 Pro (V2203A) rondedzero inosimbisa 6.62-inch kuratidza ine runyerekupe rwekuti i90 kana 120Hz AMOLED padivi pe4,400 mAh bhatiri uye 66W yekuchaja. The… [Verenga zvakawanda ...] nezve vivo S15 Pro inoonekwa muTENAA uye 3C zvinyorwa padivi pefoni itsva isinganzwisisike
iQOO Neo 6 SE kuratidza 64MP kamera ine OIS rutsigiro
April 30, 2022 by Justin26
iQOO yakasimbisa kuvhurwa kweNeo 6 SE muChina muna Chivabvu 6. Foni ichave mutsivi weiQOO Neo 5 SE yakaziviswa gore rapfuura. Maererano nechikwangwani chitsva iyo smartphone ichava nekamera huru ye64MP iyo yakafanana neNeo 6. Iyo 64MP sensor ichava nerutsigiro rweOptical Image Stabilization (OIS). Zvinoenderana nemukuru wetii, iyo iQOO Neo 6 SE ... [Verenga zvakawanda ...] nezve iQOO Neo 6 SE kuratidza 64MP kamera ine OIS rutsigiro